ZONKE IZIGABA IZINDABA
ALLPACK iyona enkulu kunazo zonke emaphaketheni nokudla processing imishini lombukiso Indonesia, ebanjwa njalo ngonyaka. Minyaka yonke, lo mbukiso edonsela abathengi ezimbonini efanele e-Indonesia futhi emazweni angomakhelwane. Sikhungo iphrojekthi iqukethe emaphaketheni imishini kanye nezinto emabhokisini ukudla proce ...
iziphi izici zangaphandle ekusetshenzisweni cleaner iyunithi umphumela
umlawuli ku 19-09-06
Umshini futha libhekisela kudivayisi noma imishini ukuthi USEBENZISA mechanical, ephathelene nomzimba namakhemikhali awo, noma physicochemical izindlela kukhishwe umoya kusukela isitsha akhishwa ukuthola cleaner. Ngokuvamile, cleaner futha yidivayisi ukuthuthukisa, ukukhiqiza kanye nokugcina cleaner endaweni avaliwe ngezindlela ezihlukene. T ...
yesondlo Daily cleaner futha iyunithi
Umshini futha libhekisela kudivayisi noma imishini ukuthi USEBENZISA mechanical, ephathelene nomzimba namakhemikhali awo, noma physicochemical izindlela kukhishwe umoya kusukela isitsha akhishwa ukuthola cleaner. Ngokuvamile, futha cleaner umshini ngcono, edonsa futhi igcina cleaner endaweni avaliwe ngezindlela ezihlukahlukene. -Wi ...
Carbonated Beverage Production Line, Aluminium Ucwecwe Umshini Ukupakisha Machine, Umshini Ukupakisha Machine, Okuzenzakalelayo Isiphuzo Ukugcwalisa Machine,